သတင်း - စက်၊ အပူနှင့်ဓာတုဖိစီးမှုအောက်ရှိ sealants များ၏အပြုအမူကိုမျက်မြင်သုံးသပ်ခြင်း
သွားများအားဖယ်ရှားရန်ပြုပြင်ထားသောကိရိယာများကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများအတွက်သွားနှင့်ခံတွင်း၌သုံးသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပင်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးခက်ခဲခြင်းနှင့် multibracket ကရိယာများ (MBA) ဖြင့်ကုထုံးစဉ်အတွင်း plaque နှင့်အစားအစာအကြွင်းအကျန်များဆက်စပ်လာခြင်းသည်နောက်ထပ်ပိုးစားနိုင်ခြေကိုကိုယ်စားပြုသည်။1မရ။ MBA နှင့်ကုသမှုခံယူစဉ်ကာလအတွင်းမကြာခဏဖြူဖျော့သော၊ ကြွေလွှာ၌ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေသော demineralization ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်နှင့် ၄ ပတ်အကြာတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက buccal မျက်နှာပြင်များပိတ်ခြင်းနှင့်အထူး sealant များနှင့် fluoride အရောင်တင်ဆီများအသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည်သွားပိုးစားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူမျိုးစုံသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းတင်ပြီးနောက် ၆ လမှ ၁၂ လအကြားကာကွယ်မှုကိုကတိပြုသည်။ လက်ရှိစာပေများတွင်ကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဤထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်အကျိုးရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးမျိုးသောပြောဆိုချက်တွေရှိပါတယ်။ မကြာခဏသုံးလေ့ရှိသောထုတ်ကုန်ငါးမျိုးမှာ composite based sealants Pro Seal, Light Bond (Reliance Orthodontic Products, Itasca, Illinois, USA) နှင့် Clinpro XT Varnish (3 M Espe AG Dental Products, Seefeld, Germany) တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် fluoride varnishes Fluor Protector (Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, Germany) နှင့် Protecto CaF2 Nano One-Step-Seal (BonaDent GmbH, Frankfurt/Main, Germany) တို့ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Flowable, light-curing, radiopaque nanohybrid composite ကို positive control group (Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent, Ellwangen, Germany) အဖြစ်သုံးခဲ့သည်။
မကြာခဏအသုံးပြုသော sealant ငါးမျိုးသည်စက်ဖိအား၊ အပူဝန်နှင့်ဓာတုထိတွေ့မှုတို့ကြောင့် demineralization ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး WSL ကိုတွေ့ကြုံပြီးနောက်သူတို့၏ခုခံမှုဆီသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
1.Null hypothesis: စက်၊ အပူနှင့်ဓာတုဗေဒဖိအားများသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးထားသော sealants များကိုမထိခိုက်ပါ။
2. အခြားယူဆချက်: စက်၊ အပူနှင့်ဓာတုဖိစီးမှုများသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးထားသော sealants များကိုထိခိုက်စေသည်။
ဒီ initro လေ့လာမှုမှာ bovine ရှေ့သွား ၁၉၂ ချောင်းကိုသုံးခဲ့တယ်။ bovine အံသွားများကိုသတ်သောတိရစ္ဆာန်များ (သတ်ရုံ၊ Alzey၊ ဂျာမနီ) မှထုတ်ယူသည်။ သွားများအတွက်ရွေးချယ်ရေးစံနှုန်းများမှာသွားမျက်နှာပြင်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သွားသရဖူ၏လုံလောက်သောအရွယ်အစားမရှိခြင်း၊ သွားပိုးစားခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းချက်မရှိသော vestibular ကြွေလွှာများဖြစ်သည်။4မရ။ သိုလှောင်မှုသည် ၀.၅% chloramine B solution တွင်ရှိသည်5, 6မရ။ bracket မသုံးခင်နှင့်ပြီးနောက်၊ bovine သွားအားလုံး၏ vestibular ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်များကိုရေနှင့်ဆေးပြီးလေနှင့်အခြောက်ခံပါ။5မရ။ နီကယ်ကင်းသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုကွင်းများကိုလေ့လာမှုအတွက် (Mini-Sprint Brackets, Forestadent, Pforzheim, Germany) ကွင်းအားလုံးကို UnitekEtching Gel, Transbond XT Light Cure Adhesive Primer နှင့် Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive (အားလုံး3M Unitek GmbH, Seefeld, Germany) တွင်သုံးသည်။ bracket ကိုအသုံးချပြီးနောက် vestibular ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်များကိုမည်သည့်ကော်အကြွင်းအကျန်မှမဆိုဖယ်ရှားရန် Zircate Prophy Paste ဖြင့်သန့်ရှင်းသည်။5မရ။ စက်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်စဉ်စံပြလက်တွေ့အခြေအနေကိုတုပရန် ၂ စင်တီမီတာရှည်သောတစ်ခုတည်းသော archwire အပိုင်းအစ (Forestalloy အပြာရောင်၊ Forestadent၊ Pforzheim၊ ဂျာမနီ) ကို preformed wire ligature (၀.၂၅ မီလီမီတာ၊ Forestadent, Pforzheim, ဂျာမနီ) တွင်ကွင်းခတ်။ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်စုစုပေါင်းတံဆိပ် ၅ ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပစ္စည်းများရွေးချယ်ရာတွင်လက်ရှိစစ်တမ်းတစ်ခုအားရည်ညွှန်းသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်သွားဆရာဝန် ၉၈၅ ဦး အားသူတို့၏သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများအနက် ၁၁ ခုတွင်ငါးခုကိုအများဆုံးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်းကျပ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ Tetric EvoFlow သည်အပြုသဘောဆောင်သောထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပျမ်းမျှစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အားကိုတုပရန်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသောအချိန် module တစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ sealant အားလုံးသည် mechanical load ကိုခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံ၊ Oral-B Professional Care 1000 (Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Germany) သည်ဤလေ့လာမှုတွင်စက်၏ဝန်အားကိုတုပရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဇီဝကမ္မအဆက်အသွယ်ဖိအား (2 N) ကိုကျော်လွန်သောအခါအမြင်အာရုံဖိအားသည်တောက်ပသည်။ Oral-B Precision Clean EB 20 (Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Germany) ကိုသွားပွတ်တံခေါင်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဖြီးခေါင်းကိုစမ်းသပ်မှုအုပ်စုတစ်ခုစီ (ဆိုလိုသည်မှာ ၆ ကြိမ်) ကိုအသစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတွင်းရလဒ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်သွားတိုက်ဆေး (Elmex, GABA GmbH, Lörrach, Germany) ကိုအမြဲသုံးခဲ့သည်။7မရ။ ပဏာမစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်သွားကြားသွားတိုက်ဆေး၏ပျမ်းမျှစားတော်ပဲပမာဏကို microbalance (Pioneer analytical balance, OHAUS, Nänikon, Switzerland) (၃၈၅ မီလီဂရမ်) ဖြင့်တိုင်းတာတွက်ချက်ခဲ့သည်။ စုတ်တံကိုရေခံပြီးရေနွေးဖြင့် ၃၈၅ မီလီဂရမ်ပျမ်းမျှသွားတိုက်ဆေးဖြင့်စိုစွတ်ပြီး vestibular သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်၌နေရာယူထားသည်။ စက်၏ဝန်ကိုအဆက်မပြတ်ဖိအားနှင့်စုတ်တံ၏ရှေ့နှင့်နောက်ပြန်ရွေ့လျားခြင်းတို့ဖြင့်အသုံးချခဲ့သည်။ ထိတွေ့ချိန်ကိုဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံကိုစာမေးပွဲစီးရီးအားလုံး၌တူညီသောစစ်ဆေးသူကလမ်းညွှန်ခဲ့သည်။ ဇီဝကမ္မထိတွေ့မှုဖိအား (2 N) ကိုမကျော်လွန်စေရန်အမြင်အာရုံဖိအားကိုသုံးခဲ့သည်။ မိနစ် ၃၀ ကြာအောင်အသုံးပြုပြီးနောက်သွားပွတ်တံကိုတစ်သမတ်တည်းနှင့်အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအပြည့်အဝအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ သွားတိုက်ပြီးနောက်သွားများကိုစက္ကန့် ၂၀ ကြာရေအနည်းငယ်ဖြန်းပြီးလေနှင့်အခြောက်ခံပါ8.
အသုံးပြုသောအချိန် module သည်ပျမ်းမျှသန့်ရှင်းရေးအချိန် ၂ မိနစ်ဖြစ်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုအခြေခံသည်9, 10မရ။ ၎င်းသည်စတုရန်းတစ်ခုလျှင်သန့်ရှင်းရေးအချိန် ၃၀ နှင့်ညီသည်။ ပျှမ်းမျှသွားတိုက်ခြင်းအတွက်သွား ၂၈ ချောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာလေးချောင်းလျှင် ၇ ချောင်းဟုယူဆသည်။ သွားတစ်ချောင်းလျှင်သွားပွတ်တံအတွက်သက်ဆိုင်ရာသွားမျက်နှာပြင် ၃ ခုရှိသည် - buccal, occlusal နှင့်ခံတွင်း mesial နှင့် distal ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သွားမျက်နှာပြင်များကိုသွားပွတ်ကြိုးဖြင့်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသင့်သော်လည်းသွားပွတ်တံကိုအများအားဖြင့် သုံး၍ မရသောကြောင့်ဤနေရာတွင်လျစ်လျူရှုထားနိုင်သည်။ ၃၀ စက္ကန့်လျှင်သန့်ရှင်းရေးအချိန်နှင့်သွားတစ်ချောင်းလျှင် ၄.၂၉ ပျမ်းမျှသန့်ရှင်းရေးအချိန်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သွားမျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင် ၁.၄၃ စက္ကန့်နှင့်ညီသည်။ အချုပ်အားဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု၏သွားမျက်နှာပြင်၏ပျမ်းမျှသန့်ရှင်းရေးအချိန်သည်ခန့်မှန်းခြေဟုယူဆနိုင်သည်။ ၁.၅ စက္ကန့် လူတစ်ယောက်ကချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုအချောဓာတ်ဖြင့်ကုသသော vestibular သွားမျက်နှာပြင်ကိုစဉ်းစားလျှင်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေး ၃ စက္ကန့်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင် ၂၁ စက္ကန့်၊ တစ်လလျှင် ၈၄ စက္ကန့်၊ ခြောက်လလျှင် ၅၀၄ စက္ကန့်နှင့်ဆန္ဒရှိသည်အတိုင်းဆက်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ ၁ ရက်၊ ၁ ပတ်၊ ၆ ပတ်၊ ၃ လနဲ့ ၆ လအကြာမှာသန့်ရှင်းမှုထိတွေ့မှုကိုပုံစံတူလုပ်ပြီးစုံစမ်းခဲ့တယ်။
ခံတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သောအပူချိန်ကွာခြားချက်များနှင့်ဆက်စပ်ဖိစီးမှုများကိုတုပနိုင်ရန်အတုကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကိုအပူပေးစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၌အပူစက်ဘီးစီးခြင်း (Circulator DC10, Thermo Haake, Karlsruhe, Germany) သည် ၅၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားနှင့်သံသရာ ၅၀၀၀ တွင်စုပ်ယူခြင်းနှင့် ၃၀ စက္ကန့်စီကြာစေသောအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အိုမင်းမှုတို့ကိုပုံတူပြုလုပ်သည်။ တစ်နှစ်ခွဲ11မရ။ အပူကန်များသည်ရေစက်ရေများနှင့်ပြည့်နေသည်။ ကန ဦး အပူချိန်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်အအေးနမူနာနှင့်အပူရေကန်ကြားတွင်အကြိမ် ၅၀၀၀ တုန်ခါသွားခဲ့သည်။ နှစ်မြှုပ်မှုတစ်ခုစီသည် ၃၀ စက္ကန့်၊ နောက်တွင် ၃၀ စက္ကန့်ကျဆင်းသွားပြီးလွှဲပြောင်းချိန်ယူသည်။
ခံတွင်းရှိ sealants များပေါ်တွင်နေ့စဉ်အက်ဆစ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပြုလုပ်ရန် pH ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများမှာ Buskes ဖြစ်သည်12, 13စာပေ၌အကြိမ်များစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ demineralization ဖြေရှင်းချက်၏ pH တန်ဖိုးသည် ၅ ဖြစ်ပြီး remineralization solution ၏ ၇ သည် reineralization နည်းလမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည် calcium dichloride-2-hydrate (CaCl2-2H2O), potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), HE-PES (1 M )၊ ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက် (1 M) နှင့် aqua destillata demineralization ဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ calcium dichloride -2-hydrate (CaCl2-2H2O), potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), methylenediphosphoric acid (MHDP), potassium hydroxide (10 M) နှင့် aqua destillata တို့ဖြစ်သည်။ ၇ ရက်ကြာ pH စက်ဘီးစီးခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်5, 14မရ။ စာပေအားလုံးတွင် pH သုံးပြီးစက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာပရိုတိုကောလ်များပေါ် အခြေခံ၍ အုပ်စုများအားလုံးကို 22-h remineralization နှင့်တစ်နေ့လျှင် 2-h demineralization လုပ်ခြင်းကိုခံရသည်။15, 16မရ။ ဖန်ခွက်ဖလားကြီးနှစ်လုံး (၂၀ × ၂၀ × ၈ စင်တီမီတာ၊ ၁၅၀၀ ml3၊ Simax၊ Bohemia Cristal၊ Selb၊ ဂျာမနီ) မှအဖုံးများကိုနမူနာအားလုံးအတူတကွသိမ်းဆည်းထားသောကွန်တိန်နာများအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နမူနာများကိုအခြားဗန်းထဲသို့ပြောင်းသည့်အခါအဖုံးများကိုသာဖယ်ရှားခဲ့သည်။ နမူနာများကိုဖန်ပန်းကန်များတွင်အမြဲ pH တန်ဖိုးဖြင့်အခန်းအပူချိန် (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်5, 8, 17မရ။ ဖြေရှင်းချက်၏ pH တန်ဖိုးကိုနေ့စဉ် pH meter (3510 pH Meter, Jenway, Bibby Scientific Ltd, Essex, UK) တို့ဖြင့်နေ့စဉ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စက္ကန့်တိုင်းတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး pH တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ နမူနာများကိုပန်းကန်တစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းသောအခါနမူနာများကိုရေစက်ရေနှင့်သေချာသန့်စင်ပြီးမှဖြေရှင်းချက်များရောနှောခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်လေယာဉ်ဖြင့်ခြောက်သွားသည်။ ၇ ရက်ကြာ pH စက်ဘီးစီးပြီးသောအခါနမူနာများကို hydrophosphate တွင်သိုလှောင်ထားပြီး microscope အောက်တွင်တိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဏုကြည့်မှန် VHX-1000 VHX-1100 ကင်မရာ၊ VHZ-100 optics နှင့်ရွေ့နိုင်သော tripod S50၊ တိုင်းတာ software VHX-H3M နှင့် high-resolution 17-inch LCD monitor (Keyence GmbH, Neu- Isenburg, Germany) ကိုသုံးသည်။ bracket base ၏ incisal နှင့် apical တစ်ကြိမ်တွင်သွားတစ်ခုစီအတွက်အကွက် ၁၆ ကွက်ပါသောစာမေးပွဲနှစ်ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သွားတစ်ချောင်းလျှင်အကွက် ၃၂ ​​ကွက်နှင့်ပစ္စည်းတစ်ခုလျှင်အကွက် ၃၂၀ ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ မျက်မမြင်များနှင့် sealant များကိုမျက်မြင်အကဲဖြတ်ခြင်း၏နေ့စဉ်အရေးကြီးသောလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုကိုချဉ်းကပ်ရန်အကောင်းဆုံးကိုဖြေရှင်းရန်၊ အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုအား 1000 ×ချဲ့ထွင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အဏုကြည့်မှန်အောက်တွင်ကြည့်။ အကဲဖြတ်ရန်နှင့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်တာဝန်ပေးထားသည်။ စစ်ဆေးမှုအကဲဖြတ်ချက်များတွင် ၀ င်သည်၊ ပစ္စည်း = စစ်ဆေးသည့်အကွက်ကိုအလုံပိတ်အဖုံးနှင့်ဖုံးထားသည်၊ ၁: ချွတ်ယွင်းသောတံဆိပ်ခတ်ဆေး = စစ်ဆေးသည့်အကွက်သည်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) တစ်ချိန်၌သိသိသာသာလျော့ပါးသွားစေသည်။ sealant ၏ကျန်ရှိသောအလွှာ၊ ၂: ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု = စစ်ဆေးသည့်အကွက်သည်ပြီးပြည့်စုံသောဆုံးရှုံးမှုကိုပြသည်၊ သွားမျက်နှာပြင်ကိုမြင်နိုင်သည်၊ စာမေးပွဲစီးရီးအတွက်ကွင်းမအောင်မြင်ပါ။